Home / Caafimaad / 24 Maarso: Maalinta caalamiga ee Qaaxada
Posted by: Mahad Mohamed March 24, 2020
Himilo – Maalinta Caalamiga ah ee Qaaxada ama TB-da, waxaa la xusaa 24 Maarso sannad kasta si loo fududeeyo baahinta wacyiga iyo baraarugga la xiriira cudurka; iyada oo la qaadayo habab hal-beeg u noqon kara kahortagga iyo xad-u-yeelistiisa.
Xus sanadeedkan ayaa loogu dabaal-degay sannadkii 1882-kii markii dr. Robert Koch uu ku dhawaaqay bacteriyada Mycobacterium tuberculosis ee sababta Qaaxada ama TB-da.
Qaaxada waa cudur inta badan ku baaha hawada wasakheysan. Hayeeshe bukaanadda u dhibban xanuunkan ee qaba cudurka HIV-ADIS-ka waa kuwa ugu nugul. Waana midda ugu weyn ee sababta geerida bukaannada qaba AIDS-ka. Rubuc malyuunta Qaaxada u dhimata sannad kasta, waxay qabaan AIDS-ka. Badigood waxay ku nool yihiin Afrika.
Waxaa dhici karta inaad qabtid cudurkan oo haddana aadan ogeyn. Marka loo eego xoggaha la ururiyay, in ku dhaw 2.3 Bilyan oo qof oo dunida ku nool ayaa qaba Qaaxada, hayeeshee in badan waxaa dhacda inaysan oggaal u laheyn. Iyada oo loo eegayo xaaladaha qaar sida latent tuberculosis,qofka la nool cudurkan waxaa laga yaabaa inuusan iska arkin calaamado halis ah balse ku jira jirkiisa.
Badi cudurkani wuxuu ka jiraa dalalka soo koraya gaar ahaan Afrikada Hodanka ah, Aasiya, Latin Ameerika iyo goballada Ruushka. Qaaxada waxaa la oggaaday inay aad ugu badan tahay gabbaadka iyo hoyga ay ku jiraan dadka dib-jirka, maxaabiista, isbitaallada, qaxootiga iyo wixii soo raaca.
In kasta oo caadiyan Qaaxadu ay saameyso sanbabada, haddana xubnaha kale ee jirka sida maskaxda iyo kelyaha ayay saameyn kartaa.
Qaaxadu sannad kasta waxay kor u kaceysaa 1% gudaha qaaradda Afrika sababo la xiriira la’aanta taakuleyn iyo wacyi-gelintii loo baahnaa. Dadaallada ka jira meelaha kale ee ka baxsan qaaradda, waxay caawisay inay xakameeyaan karantiilka dadka la dhibban.
Si kasta oo ay tahayse, waxaa wali la isku raacsan yahay in laga bogsan karo Qaaxada haddii bukaanka loo helo karantiil –ay kow ka tahay nafaqeyn, baxnaano iyo sidoo kale dhameystirka muddada qoran ee dawo qaadashada.
Previous: Man United iyo Arsenal oo dalban kara Griezmann
Next: Tirada falalka xatooyada Jarmalka oo hoos u dhacday